Dhageyso: Dagaal u dhaxeeya Al-shabaab iyo Daacish oo ka socda magaalada Qandala ee Gobolka Bari – Walaal24 Newss
February 1, 2019	0	By walaal24
Wararka naga soo gaaraya magaalada Qandala ee Gobolka Bari ayaa sheegaya in uu dagaal qaraar ku dhex maray Kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish degaannada Dharaar iyo Miraale , halkaas oo Labada dhinacba uu kasoo gaaray qasaare xooggan.
Taliyihii hore ee laanta sirdoonka Puntland, Cabdi Xasan Xuseen (Cabdi yare) oo u warramayay VOA-da ayaa sheegay in dagaalkii ugu dambeeyay ee Saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay degaannadaasi uu jab xooggan kasoo gaaray Labada dhinac, kuna waayeen dagalamayaal badan.
Daacish oo Gacan ku haynta degaannada lagu dagaallamay ayaa la sheegayaa in haatan ay la wareegeen Kooxda Al-Shabaab, waloow ay weli is hor fadhiyaan Labada koxood.
Dhawaan ayay ahayd markii ay Daacish qaadashada Hubka ka joojisay Dadka ku nool Qandala iyo degaannada hoos taga, iyagoo ka baqdin qaba in ay ku soo dhuuntaan kooxda taabacsan Al-Shabaab.
Dagaalka u dhexeeya kooxaha Al-shabaab iyo Daacish ee ku dhuumaaleysta qeyba ka mid ah Soomaaliya ayaa in dhowaalaba ka soconayay degaannada ay ku sugan yihiin, iyagoo iska dilay horjoogayaal iyo dagalamayaal badan.
Waxanay kooxahani marar badan ku dagaallamaan meelaha ay ku sugan yihiin, si uu mid waliba ugu madax bannaanaado dhaca iyo cadaadiska ay ku hayaan Shacabka iyo qalqal gelinta Bulshada.
Halkan hoose ka dhageyso Talyihii hore sirdonka Puntland:-
R/wasaare Ku-xiggeenka XFS oo shir Guddoominayey kulanka guddi hoosaadka golaha wasiirrada ee tubta horumarinta dhaqaalaha